> Resource > DVD > Windows DVD Kan sameeyey aan shaqaynayn? Hel xalka halkan
Windows DVD kii iyaga uumay uma shaqeeyo on your computer? Waa hagaag, dhibaatadan dhici doona xaaladaha kala duwan. Waa adag tahay in aad xisaabiso oo xaalad aad kala kulantay oo ay helaan xalka ugu habboon inaan ku saxno. Waayo, "DVD Kan sameeyey Windows ma gubanaya" dhibaato, aan soo jeedinaynaa waa inuu u jeesto DVD gubanaya kale qalab, kuwa aan marnaba jabto. Just iloobin "Wondows DVD Kan sameeyey joojiyo ka shaqeeya".
Wondershare DVD abuura waa doorashada ugu fiican ee aad u. Waxaa had iyo jeer ka shaqeeya stably. Oo xataa ay u shaqayso in ka badan si xoog leh. Sida aan ognahay, DVD Windows Kan sameeyey, ma taageeri badan oo qaabab video, waxaad tidhaahdaan, MKV, MOV, VOB, xitaa qayb ka mid ah MP4 iyo AVI iwm Sidaa darteed, waxaan si adag ugu talinaynaa Wondershare DVD Creator sida DVD gubi kaliya, maxaa yeelay, waxay aad u ogolaanaysaa gubi ku dhowaad video kasta oo ay u DVD. Waa maxay ka badan, waxa kaliya ee aad qaadataa saddex tallaabo oo fudud loo sameeyo DVD disc xirfad leh. (Fiiro Gaar ah: waxaa sidoo kale taageertaa dhammaan noocyada DVD disc recordable oo caan ah.)
Ma waxaad wali ku dhibeen ah "Kan sameeyey Wondows DVD aan shaqaynayn" Dhibaatada? Xalka ugu soo bandhigay in qodobkan la baabi'iyo doonaa dhibaato fiican. Just si xor ah u gubi videos ama filimada si aad u DVD.
1 dejinta aad videos to this DVD gubi weyn
Si aad ku dari video files, waxaad sidoo kale ku dhacay badhanka buluug wareega on menu ugu weyn oo ay doortaan "Add Files" ikhtiyaarka ka submenu ah, ama in this app ee Murayaad bidix, guji "+ Import" badhanka. Haddii kale, jiidi jeedi video files deegaanka si ay leeg- bidix halkii.
Fiiro gaar ah: Si aad dib-u-diyaarin kuwaas video files ku daray, kaliya riix "↑" ama "↓" doorasho hoose ee suuqa kala this Haddii u baahan, waxa kale oo aad ku dhacay karaa "dar horyaalka" badhanka in lagu daro horyaalka cusub..
Talooyin: app wuxuu bixiyaa users ka dhisay-in editor video. Waxaa doonaa waxtar weyn u ah kuwa doonaya in ay ka gooyay, dalagga, shaandheyn videos, qabsato video dhalaalka / barbardhigo / satuation / mugga, ama ku darto watermark / iwm Cinwaan hor DVD ku gubanayso.
2 Samee DVD menu ah
Daaqadda Menu ah, waxaad dooran kartaa mid ka daraasiin marto menu DVD ee app ama ka badan arrimo DVD menu online. Markaas, in this template DVD menu la doortay, aad astaysto DVD menu ah shakhsi by badhamada si fudud ku daray, qoraal, sawir, ama music soo jeeda iwm Ka dib markii in, ku eegaan aad projecct uu furmo kulanka xiisaha leh ee.
3 Guba videos in DVDs
Ka dib marka aad u hubiso saamaynta saarka waa ok, waxaad kaliya geliso DVD disc maran si ay u bilaabaan gubanaya DVD aad. Tag suuqa kala Gubashada, halkaas oo aad u baahan tahay in ay sax ah "Guba si disc" doorasho iyo dhufatey "Guba" button on geeska hoose ee saxda ah. Hadda, app samayn doonaa wax ka nasasho kuu. Dhowr daqiiqo ka dib, habka gubashada waxaa dhammaan doonaa. Oo waa inaad ku raaxaysan karaan this DVD disc Writen si xor ah.
Waa mid aad u fudud, soo maaha? Sidaas, haddii Windows DVD kii iyaga uumay uma gubi doonaa videos, fadlan ha ka laba-labayn in ay isku dayaan this smart Wondershare DVD abuura .
Windows DVD kii iyaga uumay uma gubi doonaa AVI? Xalka
DVD eryi: Dooro ah DVD gudaha ama dibadda Drive?